FJKM Ampahibato Firaisana: Ny vitsikambo
FJKM Ampahibato Firaisana : Dimy minitra Vitsikambo
Ny vitsikambo dia karazany iray amin'ny vitsika izay mazoto miasa tokoa.
Biby manao fiompiana hivelomany ny Vitsikambo, ka bibilava toy ny maroandavaka no ompian'izy ireo. Amin'ny fotoana rehetra, na andro na alina, ka mbola fotoam-piasana dia miasa fatratra ny vitsikambo. Biby mifankatia ihany koa izy ireny, rehefa mifanena izy dia tsy maintsy mifanoroka, ary na mafy sy sarotra aza ny asany ho famelomana ny bibilava ompiany dia miasa sy miara-miasa hatrany izy ireo.
Mitsinjo ny andro ratsy tsy ahafahany mivoaka mitady sakafo no antony hamelomany ny bibilava izay lasa ho sakafon'izy ireo amin'izany andro ratsy izany. Ny vitsikambo dia biby mafana fo amin'ny anjara fanompoana tandrify azy, tsy mba mihalangalana na mifanjana na malaina amin'izay asa tokony hataony.
Isika Sekoly Alahady, dia ny mianatra sekoly alahady no anjara fanompoana ananantsika, eo koa ny fifanampiana amin'ny raharaha any an-tokantrano, na ihany koa amin'ny fambolena sy fiompiana ataon'ny ray aman-dreny. Andeha isika mba hianatra ireny vitsikambo ireny ka hafana fo amin'ny asa fanompoana tandrify antsika.
Andeha hataontsika tarigetra sy hotontosaina ny Tenin'ny Tompo ao amin'ny Romana 12:11 manao hoe: "Mazotoa, fa aza malaina, ary aoka hafana fo amin’ ny fanompoana ny Tompo."